Fr. မာကိုတင်ဝင်း (ဓါတ်ပုံ ခရက်ဒစ် cbcm-osc)
မန္တလေးမြို့က ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းချုပ်အသစ် အဖြစ် Fr. Marco တင်ဝင်း ကိုခန့်အပ်ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ရဲ့ မနေ့တုန်းကကြေညာချက်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကက်သလစ် ရဟန်းအမတ် ချားလ်စ်မောင်ဘို က ၀မ်း မြောက်စရာ သတင်းလို့ တုံ့ပြန်ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်း ဗာတီကန်သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အသက် ၅၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Fr. မာကိုတင်ဝင်းဟာ မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ် Nicholas Mang Thang ရဲ့ နေရာမှာအသစ်ဆက်ခံခဲ့တဲ့သူပါ။ အသက်၇၅နှစ်ပြည့်ရင် အနားယူရမယ့်သတ်မှတ်ချက်ကြောင့် မနေ့တုန်းကပဲ မန္တလေးကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ် အဟောင်းနဲ့ အသစ်နေရာလဲခဲ့ကြတာပါ။ အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ Fr. တင်ဝင်းက ရွှေဘိုနယ်သားပါ။
သူဟာ အီတလီနိုင်ငံ ၊ ရောမမြို့က Pontifical Urban တက္ကသိုလ်မှာ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကနေ ၉၇ခုနှစ် အထိ ဘာသာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီး ဒဿနိက ဗေဒနဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ ရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် မန္တလေးနဲ့ မေမြို့က အထင်ကရ ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဒဿနိကဗေဒကို သင်ကြားပို့ချနေတဲ့ ပါမောက္ခချုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။